'Nilazako ara-bakiteny ianao hoe ajanony ary mbola ataonao ihany': Niantso an'i TheHollywoodFix paparazzi i Bryce Hall noho izy naka sary azy niaraka tamin'i Tana Mongeau - Pop-Kolontsaina
Vao tsy ela akory izay i Bryce Hall dia nanao fanambarana vitsivitsy momba ny TheHollywoodFix. Nilaza ny YouTuber amerikana fa manaja ny paparazzi TheHollywoodFix izy nefa nangataka tamin'izy ireo ihany koa mba tsy hanafika ny fiainany manokana ary hanome laza ratsy azy.
Bryce Hall dia toa tofoka tamin'ny paparazzi an'ny TheHollywoodFix rehefa nanao ireo fanehoan-kevitra ireo.
Nahatsapa i Hall fa ny TheHollywoodFix dia nanandrana nahatonga azy hanana endrika mahatsiravina tamin'ny lohatenin'izy ireo ary tsy naneho fanajana azy.
Hall dia nilaza izao:
Ramatoa, azonao atao ve ny mijanona tsy manandrana manao ahy ho toy ny lavaka a **. Jereo, noteneniko ara-bakiteny ianao mba ajanony ny fakana sary ahy. Ianao no naka sary ahy, noteneniko ara-bakiteny ianao hoe ajanony ary mbola ataonao ihany.
Bryce Hall dia voarohirohy noho izy niaraka tamin'i Thomas Petrou avy amin'i Hype House ... https://t.co/cebKvMfHxi
- HIDE ღ❤ღ ꒰ ･ ‿ ･ ๑꒱㌰㌰ ofisialy (@ Italiajin21) 28 aogositra 2020
Nolazainy tamin'ny TheHollywoodFix paparazzi fa nahita ny horonantsarin'izy ireo izy ary nahafantatra ny lohatenin'izy ireo. Rehefa nanontaniana momba ny anaram-boninahitra tiany horesahina i Bryce dia nilaza ireo anaram-boninahitra milaza azy ireo. Ny paparazzi dia manome ny antony tsy nametrahany ireo lohateny ireo ho an'ny clickbait. Hoy ny paparazzi manokana:
'Teny fanalahidy fotsiny ho an'ny tsindry izany.'
Nambaran'i Bryce Hall fa ity karazana fanaovana tatitra ity dia mahatonga azy ho ratsy endrika fotsiny amin'ireo mpankafy azy na dia tsy nanao na inona na inona aza izy. Nanaja olona tamim-pahamendrehana nandritra ny fotoana rehetra izy fa tezitra tamin'ny nanohizan'izy ireo ny filma na dia nangataka azy ireo aza izy.
Mifandraika: Tsy nahy nandefa lahatsoratra natokana ho an'i Addison Rae tamin'i Josh Richards i Bryce Hall, ary nanenina avy hatrany tamin'ny fanapahan-keviny
Mifandraisa: Niala tsiny tamin'i Noah Beck sy Dixie D'Amelio i Bryce Hall tamin'ny fanomezana azy ireo efitrano fitsangantsanganana amoron-dranomasina any Malibu
Bryce Hall dia manana teboka iray momba ny toe-javatra nofaritany
Raha manandrana mifanjohy hevitra amin'ireo mpanao gazety ao amin'ny TheHollywoodFix i Bryce Hall, dia lavin-dry zareo hatrany ny mandà ny fakan-tsary an'i Bryce. Na dia manao ilay adihevitra aza izy ireo fa nijanona tsy naka sary dia nanohy naka sary an'i Bryce avy teo anilany. Tsy mikasa ny hijanona izy ireo, araka ny fahitana azy tamin'ny clip manontolo, satria naka sary azy izy talohan'ny nahatongavany hiresaka tamin'izy ireo ary na dia taorian'ny nialany aza.
araka ny tokony ho izy
ankafizo ireo zavatra tsotra amin'ny fiainana
- M | PAU CLUB (@Bricehaul) 28 Febroary 2021
Tsy mitovy amin'ny paparazzi ny manao izay azony atao mba hahazoana horonantsary satria anjaran'izy ireo izany. I Bryce aza dia nanondro ny asan'izy ireo. Ny tena teniny dia:
Manao ny asanao ianao, azoko izany, saingy hafahafa izany.
Mbola maro no sosotra noho ny nilazan'ny TheHollywoodFix tamin'i Bryce fa tsy fanajana no dikan'izy ireo ary najanon'izy ireo ny fanaovana sary an-tsary fotsiny mba hanohizany ny fakana sary azy avy eo anilany. Nohazavain'i Bryce mazava fa miteraka alahelo aminy izany ary mety tsy ho tsara fanahy aminy amin'ny manaraka.
Mifandraika: Mamitaka an'i Addison Rae ve i Bryce Hall? Ny horonan-tsary Viral dia mamela ny fanahian'ny mpankafy
Mifandraisa: Nametraka vidiny $ 7.5 tapitrisa i Bryce Hall tamin'ny lalao ady totohondry Austin McBroom, nilaza fa $ 1.5 tapitrisa fanampiny 'bonus knockout'
dragon ball super manaraka arc
any am-piasana aho dia misy dikany voatokana
inona no sandan'ny kelly clarkson
zavatra atao, rehefa leo ny anatiny
dia fanjakana romana ary misy ifandraisany amin'ny vatolampy